कमरेड ओली संग कसैको तुलना हुनै सक्तैन ? — newsparda.com
कमरेड ओली संग कसैको तुलना हुनै सक्तैन ?
पुण्यकुमार पन्त , कमरेड केपी शर्मा ओली १४ वर्ष जेल वसेकै हुन । जेलमा अल्सरले पिडीत भएर गोलघरको कष्ट सहेकै हुन । जेलबाट निस्केर २०४६ को आन्दोलन पछि एक पटक प्रजातान्त्रीक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको संयोजक पनि भएका हुन । युवा संघको दुईटा वैठक राखेर राष्ट्रिय सम्मेलन सम्म गराएकै हुन । त्यस पछि उनले सधै पार्टीको संसदिय विभागको प्रमुख भएर काम गरेका हुन ।
उनी प्रमुख भएको संसदिय विभागको वैठक कती हुन्थे ? भैहाले पनि कसरी हुन्थे ? तत् तत् समयका विभागका सदस्य र सांसदहरूलाई सोधे पछि थाहा हुन्छ । लामो समय उनी संग संगै संसदिय विभागमा वसेर काम गरेका साथीहरूवाट हाई काढ्दै महाधिवेशनको लागी प्रतीनिधी चुन्ने वेलामा मात्र विभागको वैठक बस्ने गरेको गुनासो सुनिने गरिन्थ्यो । यसवाट वहाको संगठनात्मक जीवन कस्तो हुन्थ्यो स्पष्ट हुन्छ । जहिले पनि पार्टीमा प्रतिपक्षी जस्तो भएर आलोचनात्मक गुट संचालन वहाको दिन चर्या हुन्थ्यो । त्यसैले वहाँसँग कसैको तुलना हुन सक्दैन ।
नेकपा एमालेको छैठौ महाधिवेशनमा पार्टी विभाजीत भएको थियो । पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र महासचिव माधव कुमार नेपाल र कमरेड भरतमोहन अधिकारी पार्टीलाई फुटवाट जोगाऊन लागी रहनु भएको थियो । पार्टी भीत्र असन्तुष्टी राखिरहेका वामदेव गौतम लगायत ठुलो पक्ती थियो । उनीहरूले उठाएका कतिपय ईस्युहरू जायज थिए । छलफल गरेर टुंग्याउन सक्ने प्रसस्त गुन्जायस पनि थियो तर कमरेड ओली टसकोमस हुनु भएन ।
अध्यक्ष कमरेड मनमोहन अधिकारी र माधव कुमार नेपाल कुनै पनि मूल्यमा पार्टी एकता जोगाउने पक्षमा हुनु हुन्थ्यो । त्यस्तै परे ४० प्रतिशत केन्द्रिय सदस्य दिएर पनि पार्टी एकता जोगाऊन चहानु हुन्थ्यो । वहाहरूको योजना विफल वनाऊदै कथित अडानका नाममा आत्मकेन्द्रीत कमरेड केपी ओलीले ढिपी कसेर ४० प्रतिशत कुनै हालतमा हुदैन भन्दै कमरेड वामदेव गौतमहरू संग दुरी वढाउन लाग्नु भयो । पार्टी एकतावध्द हुदा कमरेड केपी शर्मा ओली ९\_१० नम्वर पछिको नेता हुने अवस्था थियो ।
पार्टी विभाजन हुदा कमरेड केपी शर्मा ओली तेश्रो चौथो नम्बरको नेता हुन आई पुग्नु भयो । कमरेड सहाना प्रधान , सिपी मैनाली, वामदेव गौतम, आर के मैनाली सवै उनी भन्दा सिनीयर नेता थिए । उनी वडो मेहनत साथ पार्टी विभाजन गरेर देशलाई नोक्सानी उपहार दिएर भए पनि आफ्नो नम्बर वढाऊन तल्लीन नेता हुन । त्यसैले ओली संग अरू कसैको तुलना हुनै सक्दैन । पार्टीको सातौ महाधिवेशनमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले छुट्टै दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए । उनको दस्तावेजले लगभग २०० जती कार्यकर्ता हरूको समर्थन पाएको थियो । यसवाट उनले कार्यकर्ताहरूको मनस्थीतीको अनुमान गरि हाले । केन्द्रिय कमिटीको चुनावमा वेहाल हुने पक्का देखेपछि आफु सुरक्षित हुन माधव नेपाल संग हात मिलाउने काम गरे ।
माधव नेपाल संग हात मिलाएर केहि केन्द्रिय सदस्यहरू जीताऊन सफल पनि भए । फेरी पनि ओली गुटका केन्द्रीय सदस्यका प्राय सवै उम्मेदवारहरू भारी मतले पराजीत भए । त्यसपछि केन्द्रिय कमिटी वैठकमा कमरेड ओलीको उपस्थीती विद्रोही नेताको जस्तो हुन थाल्यो ।
उनी उपस्थीत पार्टीका वैठकमा प्राय रडाको मच्चिने गर्दथ्यो । उनको रडाकोको चरम अवस्था भनेको पार्टी फोर्ने धम्की नै हो । उतीवेला पनि ५७ भाई नेताहरूको नाममा पार्टी फोर्ने धम्की सहितको वक्तव्य जारी गराऊनु भयो । पार्टीमा विग्रह आउन सक्ने खतरा देखेर कमरेड माधव कुमार नेपालले तत्काल उनी संग छलफल सुरू गर्नु भयो । तुरून्त पार्टीको वैठक आयोजना गरि महाधिवेशनवाट पराजीत उनको गुटका १० जना सदस्यहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा थपेर गुनासो सम्वोधन गरेका थिए । आफ्ना १० भाईलाई केन्द्रीय कमिटीमा थप्न वाद्य वनाएर मात्र अलीकती चैनको सास लिएका नेता हुन केपी शर्मा ओली । अव भन्नुस त कमरेड ओली संग अरू कसैको तुलना हुन सक्छ ?
वुटवलको आठौ महाधिवेशनमा पराजीत भएपछि के के चमत्कार गरिए । नेकपा एमालेका सवै नेता कार्यकर्ताहरुको ऑखा अगाडी अहिले पनि झलझली आऊछ । महाधिवेशनमा भारी मतले पराजीत भएपछि कथित धांधलीको नौटंकी रचेर लोक हसाऊने काम गरे । तिघ्रा ठटाएको भरमा विजयी उम्मेदवार लाई पराजीत र पराजीत उम्मेदवारलाई विजयी घोषित गराए । दुनियाँका अगाडि पार्टीको वदनामी गराऊन कुनै कसर वाकी राखेनन । पार्टीको आठौ महाधिवेशनवाट पारीत गरिएका निती तथा कार्यक्रमहरूको शन्देश समेत जनतामा पुर्याउन अवरोध खडा गरेर हैरान पारे ।
पार्टीका नया नितीहरूलाई पुरै वन्दी वनाएर राखी दिए । अनेक थरिका बनावटी नौटंकी गरेर पार्टीमा व्यापक सुधार गर्नको लागी महाधिवेशन वाट पारीत राजनैतीक प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्न दिएनन । पार्टीलाई विचार संगठन तथा कार्यशैलिको क्षेत्रमा आम सुधार गर्ने आठौ महाधिवेशनको क्रान्तीकारी र दुरगामी महत्वको सोच र निर्णयलाई तुहाउन योजनावद्ध षडयन्त्र गरियो । पार्टीलाई विचार, संगठन र कार्यशैलीको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी जनव्यापी र लोकप्रीय वनाउदै आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी वनाऊने योजना लाई असफल वनाऊने भरमग्दुर यत्न गरियो ।
फेरी पनि २०७० को संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष जेएन खनालकै नेतृत्वमा ९२ सिटमा विजयी भएर देशको दोश्रो ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापीत भएको थियो । यस कारण पनि ओली संग कसैको तुलना हुन सक्दैन । २०७० सालमा कमरेड झलनाथ खनालको वैचारिक नेतृत्वमा प्राप्त सकारात्मक परिणामको आधारमा नेकपा एमाले संयुक्त सरकारमा सामेल भएको थियो । एमालेको तर्फबाट सरकारमा जम्मा नौ जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
कमरेड केपी ओली र कमरेड वामदेव गौतमको सिफारिस छ जना मन्त्री थिए भने कमरेड भीम आचार्य, कमरेड लालवावु पण्डित र पुरुषोत्तम पौडेल सहित तिन जना मन्त्री कमरेड जेएन खनालको सिफारिसमा सरकारमा सामेल गराईएका थिए । नेकपा एमालेको नवौ महाधिवेशन पछि कमरेड केपी ओली पार्टी अध्यक्ष हुनु भयो । वहाँले सबै नियन्त्रण आफ्नो हातमा लीन थाल्नु भयो । कति सम्म नियन्त्रण गर्नु भयो भने कमरेड भीम आचार्यले तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष जेएन खनालको सुझावमा नेपाल वायुसेवा निगममा एकजना अध्यक्ष नियुक्त गरे वापत खेदो खन्नु भयो ।
खेदोमात्र खन्नु भएन अन्तमा उनको मन्त्री पद समेत क्वीट गरि दिनुहुन भयो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा खाली रहेको सदस्य सचिव पदमा नेपाल खेलकुद महासंघको कार्यवाहक अध्यक्ष केशव विष्टलाई नियुक्त गरे वापत खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पोडेललाई आधारहिन र वेतुकको विषय खडागरी अख्तियारमा उजुरीगर्न लगाइयो । भ्रष्टाचारी लोकमान सिह कार्कीलाई दवाव दिएर उसलाई नियुक्त गर्न लगाएको गुन सम्झाएर कथित कार्यबाहीको पत्र लेख्न लगाइयो ।
अख्तीयारको उक्त गैरकानुनी तथा वनावटी कार्यबाहीको पत्रलाई सर्वोच्च अदालतले सुरू देखिनै वदर गरिदियो । अहिले प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीका थुप्रै नियुक्तिहरू सर्वोच्च अदालतद्वारा धमाधम वदर भइरहेका छन । त्यसैले पनि कमरेड ओलीसंग अरू कसैको तुलना हुन सक्दैन । अहिले कमरेड ओलीवाट भएका नियुक्तिहरूलाई हेर्न सकिन्छ । भनिन्छ सकभर नातागोता भएका ‘ झापाली ‘ पर्छन । त्यसो नभए मदनभण्डारी फाउन्डेसनको नाममा संगठित गुटको सिफारिसका मान्छे पर्छन ।
केही नलागे वहाँको भजन कीर्तनमा उस्तादी कमाएका वहादुरहरू हुन्छन । इमानदारी पूर्वक पार्टीमा काम गरेका वुध्दीजीवीहरू या पालो कुर्दै वसेका कार्यकर्ताहरू त पर्खाल वाहीरको वाहीर मात्र हुन्छन । यस पाली सरकारमा आएपछि पनि नेपाल वायु सेवा निगममा पटक पटक गन्हाएका अक्षम मदन खरेललाई नियुक्त गरिएको थियो । दिगम्बर झा जस्तो डुङडुङ गन्हाएको मान्छेलाई दुर संचार प्राधिकरण जिम्मा लगाइएको थियो ।
हालै योग्यतम विचौलीया शुसिल भट्टलाई नेपाल लगानी वोर्ड जस्तो सम्वेदनशिल संस्थाको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ । भजनिया तथा गाली वेईज्जती सम्राट गुरू भट्टराई लाई रेलवे कम्पनीमा महानिर्देशक र कल्याण रोक्का ( देवराज ) लाई युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । प्रशासनमा काम गरेका उस्ताद विचौलीया पुरूषोत्तम खनाललाई दुर संचार प्राधिकरण जस्तो सम्वेदनशिल संस्थाको महाप्रबन्धक वनाईएको छ ।
यती समुहको त सरकारमा विगविगी नै छ । यती समूहका कर्मचारी सिताराम सापकोटालाई समेत नेपाल ट्राष्टको संचालक वनाईएको छ । यती समूहकै फूर्वाग्याल्जेन शेर्पा लाई नेपाल एयर लाइन्सको वोर्ड सदस्य, यती समूहकै साहुनी दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूत नियुक्त गरिएको छ । वैदेशीक रोजगारीमा गएका युवाहरू संग दुई अरव ठगेको आरोपमा पूर्व मन्त्री माननिय गोकर्ण विष्टको पालामा कार्यवाहीमा पारेका ठग दलाल कैलाश खड्कालाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ । विना कुनै विशेष भूमिका विवादीत व्यक्ति रमेश सिलवाललाई खेलकुद परिषदमा दोश्रो पटक सदस्य सचिव नियुक्त गरिको छ ।
आफ्ना होनहार प्रशासक हरूलाई दुई पदकको नियुक्ती सामान्य हो । वहाँको इच्छा मात्र जागृत हुनु पर्छ । वहाँको दिल खुश वनाई दिन सक्नु पर्दछ । पाच पटक, सात पटक पनि नियुक्त हुन सक्दछन । हेर्नुस त डाक्टर युवराज खतिवडा झापाली खाटी गुटका हुन । वहाका आफ्नै छिमेकी पनि हुन । योजना आयोगको सदस्य दुई पटक, योजना आयोगको उपाध्यक्ष दुई पटक, गभर्नर एकपटक , राष्ट्रिय सभा सदस्य एकपटक, मन्त्री दुईपटक , विना लगानी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि नियुक्त भएका छन ।
कसैले सक्छ । अहिले सम्दीकै सातौ नियुक्तिको कुरा गरौ । यस्ता अरू पनि कति छन कति । आट भएकाले गर्ने न हो । हेर्नुस त वाल्यकाल देखी नै पार्टीको पक्षमा पत्रकारिता गरेका किशोर श्रेष्ठ लाई म्याद सकिन एक महिना जति वाकी होला प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष वाट हटाएर अर्कि प्रिय झापाली वहिनी लाई ल्याउन हतार भयो । यत्रो ठूलो पार्टीको अध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्री, कतिपयले राजनेता भनेको पनि सुनिन्छ । यती तल सम्म झर्न सक्नु हुदोरहेछ । यसैले पनि वहाँको तुलना अरू कुनै नेता संग हुनै सक्दैन ।
यती मात्र होर ? वहाँ त सुशासन र इमानको प्रवक्ता हो । पानी जहाज ल्याउदै हुनु हुन्छ, टिकट विक्री काउण्टर खुली सक्यो । विजुली वसको उद्घाटन भैसक्यो । वहाँले उद्‍घाटन गरेको विजुली वस कता गायब भयो । रेल्वे त अव गुड्नै लागी सक्यो । घरघरमा ग्यासको पाइप चाडै पुग्दैछ रे । लाजको मर्नु । अरू विकासका कार्यक्रम तुफानी गतिमा अघि वढ्दैछ रे । गरिवी त चाडै सकिन्छ । देशमा कसैलाई खानको कुनै समस्या हुने छैन । भ्रष्टाचार त अव निमीट्यान्न हुन्छ ।
वाईड वडिमा छानबिन भन्दा पहिले नै भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पारी दिनु भएको छ । वहाकै केटाको सत्तरी करोडवाला अडियो सार्वजनिक भयो । छानबिन भन्दा पहिल्यै अडियो नक्कली भएको घोषणा गरि दिनु भयो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी ग्रुप संगको मिले मतो र भ्रष्टाचारको कुरो आयो । वहाँले पहिले नै कुनै किसिमको अनियमितता र गलत काम नभएको कुरा सवैलाई सुचित गरि दिनु भयो । गोकर्ण रिसोर्टको त कुरै छोडि दिऊ ।
त्यो त यती समूहको आफ्नै कारोबार हो । सरकारले गर्ने आईटी कारोबारको त कुरै गर्नु पर्दैन । दुई दुई जना आईटी विज्ञहरू सल्लाहकार समूहमै वसेका छन । यस्तो सुन्दर व्यवस्था अरू कसैले गर्न सक्छ । चान चुनेको आटै पुग्दैन । संसदीय छानबिनलाई वहा मान्नु हुन्न । अख्तियारमा आफ्नै छिमेकी भाई राख्नु भएको छ । त्यसैले राजनेता कमरेड ओली वा संग अरू कसैको तुलना हुनै सक्दैन ।।।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई त वहाँले मुठ्ठीमा लिएर राख्नु भएको छ । ” अछ्यु खाइ वच्छ्यु खाइ झुसेवारूलो ” भने जस्तो हो । वहाले भर्खर पार्टीको निर्देशनमा नक्सा पास गरि सक्नु भएको छ । त्यस्तो नक्सा पास गर्न सक्ने नेता संग कमरेड माधव कुमार नेपाल, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अनि झलनाथ खनालले निऊ खोजेर के हुन्छ र । वामदेव कमरेड त वहाको देव्रे हातको खेल होला ? अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड संग पनि एक डेढ घण्टा एक्लै कुरा गर्न पाए पछि वात सल्टीन सक्छ ।
वहाको नजरमा सचिवालय त अलिकति समय र लेनदेनको खेल हो । स्थायी कमिटी ‘ हुल्लडवाज ‘ हरूको अखडा हो । त्यहा नगई दिए सकि गो । ‘ सडक छाप ‘ केन्द्रीय सदस्यहरूको वैठक वेकारमा किन राखी रहनु पर्यो र । उनीहरूलाई सडकमा मज्जासँग घुम्न दिऊ । कमरेड माधव नेपाल र झलनाथ अलि अररो अररो भाका छन । कहि नभाको विधि र विधानको कुरा गर्छन । यीनलाई पनि केही उपायले ठिक पारिन्छ । सामदाम दण्ड भेद सबै प्रयोग गरिन्छ । कुनै समस्या छैन । त्यसैले कमरेड ओली संग तुलना हुने अरू कुनै पनि नेता नेपालमा छैन । जय नेपाल ।।।